Umbhali uTom Morris uphendula athi: Ukuba uHarry Potter usebenze ngombane Jikelele | Martech Zone
Umbhali uTom Morris uphendula athi: Ukuba uHarry Potter usebenze ngombane ngokubanzi
NgoLwesine, Agasti 3, 2006 NgoMvulo, Septemba 23, 2013 Douglas Karr
Andikholelwa ukuba usuku luhamba ndingothuswanga ziziphumo ze-Intanethi, uGoogle, kunye neeNethiwekhi zeNtlalo kwihlabathi lethu. Oko kungavakala 'njenge-geeky' kodwa ndifikile ekhaya namhlanje kwaye ndinempendulo entle kakhulu kwiposti yam malunga UTom Morris ' ncwadi, Ukuba uHarry Potter waqhuba umbane ngokubanzi. Yenze nje usuku lwam! Iposti epheleleyo kunye nezimvo ezivela kuTom zezi Apha.
UTom undithengisile kwincwadi yakhe, ngokulunga ngokwaneleyo ukuba angathatha ixesha lokuba abulise kwaye anike imvelaphi kwincwadi yakhe. Kukangaphi sikubona oku namhlanje? Andizange ndibeke bham kwisipaji sikaTom, kodwa xa wabona iposti yam nge-net, wayelungile ngokwaneleyo ukuba angabulisa. Ukuthatha ixesha kwishedyuli yakhe yokuphendula kwiposti yam sele kundixelele ukuba ulwazi endiza kulifunda kwincwadi kaTom luya kuzalisekisa ukutsho nje okuncinci.
Ngelishwa, bendisandula ukufika ekhaya ndisiya kwivenkile yaseVerizon apho ndathenga khona ifowuni yam kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Ndaye ndema emgceni kangangemizuzu engama-55 (ewe, kuyinyani oko), ndaphakama ndaya edesikeni, ndaza ngokukhawuleza ndanikwa ikhadi leshishini elinenombolo yefowuni kulowo ndifuna ukubiza malunga nefowuni yam eyaphukileyo. Ndichithe imali eninzi kunye naba bafana, kwaye bebengakhange babonakale bonwabile ukundibona!
Inqaku elisecaleni… Ndabhala uTom ndimqhula ndimxelela ukuba andingomntu othanda uHarry Potter, kodwa uyandiqinisekisa ukuba andizukuba naxhala. Wabhala:
Incwadi ibhalwe ngendlela enokuthi ingafikeli kulwazi olucwangcisiweyo okanye ukuthanda izinto ngokubhekisele kuHarry Potter. Ndivile kwiibhantshi ze-CEO ezingazange zifunde igama likaMbumbi nababhala bedumisa le ncwadi!
Enkosi ngemeyile yakho emnandi! Ndiyathemba ukuba uyifumana entsha inoveli ehlaziyayo kwaye ivuselele eyakho imbonakalo! Abanye bandixelele ukuba isahluko esingobuxoki sasisodwa ixabiso lencwadi.
Enkosi, Tom! Qiniseka ukuba ujonge kum xa ufika e-Indianapolis. Ikofu iphezu kwam!
tags: uharry PotteruTom Morris
Wikiality, Inyaniso, kunye nokuchaneka